Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kuvumela ukufakwa okusebenzayo futhi okufana kokunye kwama-nano fillers kuma-resins. Abahlakazayo be-Ultrasonic bangakwazi ukuphatha kalula ukuhlushwa okuqinile okuphezulu ukuze kukhiqizwe izinhlaka ezigcwele kakhulu ngokusatshalaliswa kwezinhlayiyana ezifanayo. I-Sonication iyahambisana nalo lonke uhlobo lwama-resins ajwayelekile, ama-polymers kanye nama-filler.
Izinhlaka ezigcwalisiwe namaPolymer
Izinhlaka ezigcwalisiwe nama-polymers asetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni kwezimboni okokusebenza okuphezulu, upende, izinto zepulasitiki kanye nesayensi yezinto ezibonakalayo. Eyaziwa njengamakhemikhali, le mixube iqukethe ama-resin noma ama-polymers, izithasiselo nokugcwaliswa. Izithasiselo ziyizakhi ezinjengeziqinisi nokugcwalisa okunikeza izici ezikhethekile eziyinhlanganisela. Isibonelo, ama-nano particle fillers angaqinisa ukuhlanganiswa ngokungeza amandla okuqina, ukumelana kokuqala, ukumelana ne-UV, ukuqina kwe-thermo noma ukuqina ku-resin. Ama-Stabilizers asetshenziselwa ukugcina ukwakheka kokwakhiwa kwe-resin ngokuhamba kwesikhathi nangaphansi kwezimo ezahlukahlukene. I-resin egcwele kakhulu ithola izakhiwo zayo ezikhethekile zezinto ezivela ezinhlotsheni ezithile zokugcwalisa nezithasiselo ezisetshenzisiwe. Izinhlayiya ezilingana nano zaziwa kakhulu ngezimpawu zazo ezihlukile namandla okuqinisa kakhulu. Ukugcwaliswa kokusebenza kuyisithako esibalulekile sezinto zokusebenza eziphezulu. Ukuze ufake ukufaka okufana nezinhlayiya ezisebenza kakhulu kuma-resins nakuma-polymer composites, kubalulekile ukuwaxuba njengezinhlayiya ezihlakazeke zodwa kunhlanganisela. Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kusebenza ngamabutho aphezulu okushefa, okwenza izinhlayiya ze-deagglomerate nezigayo ku-nano-scale zibe yi-resin nama-polymers. Isabalalisi se-Ultrasonic siphatha kalula izinto eziphezulu ze-viscous kanye nemithwalo ephezulu eqinile. Ngenxa yalokhu, ama-disperser e-ultrasonic akhiqiza izinhlaka ezigcwele kakhulu zekhwalithi ephezulu.
Ama-ultrasonic dispersers angakwazi ukuphatha kalula imithwalo ephezulu eqinile nama-viscosities futhi ngaleyo ndlela alungele ukukhiqizwa kwama-resins agcwele kakhulu futhi ahlanganisiwe. Isithombe sikhombisa i-ultrasonic inline disperser UIP16000hdT.
Izinzuzo Zokukhiqizwa Kwe-Ultrasonic Kwama-Resins Agcwaliswe Kakhulu
Ukwehliswa kusayizi we-nano
Iqoqwana noma ukugeleza mode
Imiphumela ephezulu yokuzala kabusha
Ama-resin agcwalisiwe akhiqizwa nge-Ultrasonically aqukethe izakhiwo ezibonakalayo eziphezulu ngenxa yokugcwaliswa okufanayo kwe-nano-dispersed. Ngokuhlanganisa i-resin ne-fillers esebenzayo ngaphansi kokuhlakazeka okuphezulu kwe-ultrasonic, okuhlanganisiwe okuvelayo kukhombisa amandla amahle kakhulu wezinto nokusebenza njengokuqiniswa kwe-fiber, ukuqhutshwa kukagesi nokushisa, izakhiwo ze-optical kanye ne-ductility.
Ama-ultrasonic dispersers angasetshenziselwa ukukhiqiza ama-master batches ama-resins agcwele kakhulu, ama-polymers nezinye izinhlanganisela, ezihamba phambili ngokusebenza okuphezulu.
Ukukhiqizwa Kwe-Ultrasonic Kwama-Resins Agcwaliswe Kakhulu
Abahlakazayo be-Ultrasonic baziwa kakhulu ngamakhono abo avelele wokucubungula izinhlayiya ze-nano ezisebenza kakhulu. I-Hielscher Ultrasonics ephezulu yokusebenza kwama-ultrasonicators aletha ama-amplitudes aphakeme ngokuthembekile, adingekayo ukusabalalisa nokusabalalisa izinto ze-nano ngokufanayo ekumisweni. Ukulimala okuphezulu nokugxila okuqinile akunazinkinga. Ngama-reactors ethu okugeleza kwe-ultrasonic, ngisho nezinto eziphakeme kakhulu ezinamathele, izinto ezifana nokunamathiswa zicutshungulwa ngokusebenza okuphezulu nokwethenjelwa. Ngakho-ke, ama-dispersers e-ultrasonic alungele ukukhiqizwa kwama-resins agcwele kakhulu futhi ama-composites.
Ama-ultrasonic dispersers angaphatha noma yiluphi uhlobo lwe-resin ne-polymer, njenge-epoxy resins, i-polyester resins, i-vinyl esters, i-polymers ne-bio-polymers, upende nokugqoka.
Noma yiluphi uhlobo lwezithasiselo nokugcwaliswa okusebenzayo kungangezwa ukuze kukhiqizwe ukuhlanganiswa ngokuya ngeresiphi yakho yokwakhiwa. Ama-filler asetshenziswa kakhulu nezithasiselo zama-resins agcwalisiwe afaka ukusebenza kwe-nano-izinhlayiya ezinjenge-CNTs, TiO2, SiO2, BaSO4, graphene, graphene oxide, Al2O3 nano platelets (corundrum), imibala yombala njll.
Lezi zigcwalisi nezithasiselo zifakwa kuma-resin ukuze zinikezwe izici ezibonakalayo ezinjengokumelana kokuqala, amandla we-tensile, ukumelana ne-UV, isicwebezelisi, i-ductility, izakhiwo ze-optical njll. Ngokusakazeka kwe-ultrasonic, ukusebenza okuhlanganisiwe okuhlukile kutholakala ngokuthembekile futhi ngokuzala kabusha.
I-Ultrasonic wet-milling nokusabalalisa kuyindlela ephumelela kakhulu yokunciphisa usayizi wezinhlayiyana, isb of TiO2
Umdwebo wobuchwepheshe we I-UIP4000hdT, i-4000 watts enamandla yezimboni ze-high-shear mixer yokukhiqiza okusemgqeni kwama-resins agcwaliswe kakhulu nezinhlanganisela ze-nano.
I-Hielscher Ultrasonics inikeza insizakalo yokukhiqiza imali ekhokhwayo noma ukwenziwa kwenkontileka kwama-resins agcwele kakhulu. Sisebenzisa ama-dispersers wethu we-high-power industrial ultrasonic ukukhiqiza ama-resin agcwele ukusebenza okwenziwe ngokwezifiso okwenzelwe izidingo zomlingani wethu wesivumelwano.
Ngaphezu kwalokho, sinikeza ama-bulks ama-epoxy resins ajwayelekile, lapho i-CNTs, i-TiO2, i-SiO2 noma i-graphene ezindaweni ezahlukahlukene ifakiwe ngokufanayo nge-ultrasonic dispersing. Sibuze ngolwazi oluthe xaxa mayelana nama-resin ethu agcwele kakhulu nezinsizakalo zethu zokukhiqiza imali!
Abahlakazeli be-High-Power Ultrasonic bokukhiqizwa kwama-Resins Agcwalisiwe
Imiklamo ye-Hielscher Ultrasonics, ikhiqiza futhi isabalalise ama-disperser asebenza kahle kakhulu wezinhlelo zokusebenza ezisindayo njengokukhiqizwa kwama-resin agcwele kakhulu futhi ahlanganiswe. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher asetshenziswa umhlaba wonke ukusabalalisa izinto ze-nano kuma-resins, ama-polymers, upende nezinye izinto zokusebenza eziphezulu.
Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimbonini e-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aqhubekayo aphezulu kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa kalula ekusebenzeni kwe-24/7. Inketho yokusebenzisa i-disperser ye-ultrasonic kuma-amplitudes aphakeme futhi ukulungisa ubukhulu bakhona kuyadingeka ukuvumelanisa izimo zenqubo ye-ultrasonic ekwakhiweni kwama-resins agcwele kanye nezinhlanganisela.
Enye ipharamitha yenqubo ebalulekile ingcindezi. Ngaphansi kwengcindezi ephakeme, ubukhulu be-cavitation ye-ultrasonic namandla ayo e-shear ayaqina. Iziphenduli ze-Hielscher ze-ultrasonic zingacindezelwa. Izintambo zenzwa yokucindezela ezixhumeka ziya ku-generator ye-ultrasonic, lapho imingcele yokucubungula efana namandla e-ultrasonic, izinga lokushisa, ingcindezi nesikhathi kugcinwa ngokuzenzekelayo kukhadi le-SD elakhelwe ngaphakathi.
Ukuqapha inqubo nokuqoshwa kwedatha kubalulekile ekumisweni kwenqubo okuqhubekayo kanye nekhwalithi yomkhiqizo. Ngokufinyelela kudatha yenqubo erekhodwe ngokuzenzekelayo, ungabuyekeza ama-sonication run wangaphambilini futhi uhlole umphumela.
Esinye isici esisebenziseka kalula isilawuli kude sesiphequluli sezinhlelo zethu ze-digital ultrasonic. Ngokulawula isiphequluli esikude ungaqala, ume, ulungise futhi ubheke iprosesa lakho le-ultrasonic ukude kusuka noma ikuphi.
Xhumana nathi manje ukuze ufunde kabanzi mayelana nama-dispersers ethu asebenza kahle kakhulu we-ultrasonic kanye nezicelo zawo ekukhiqizeni ama-resins agcwele kakhulu futhi ama-composites! Uma unentshisekelo kwezinsizakalo zokwenza imali, sicela usibuze isiphakamiso!